ချစ်စရာ LGBT စုံတွဲလေး အဖြစ် လိုက်ဖက်လွန်းကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဆောင်းယွန်းစံ နဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ မေချစ်သွေး – Shwe Likes
ချစ်စရာ LGBT စုံတွဲလေး အဖြစ် လိုက်ဖက်လွန်းကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဆောင်းယွန်းစံ နဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ မေချစ်သွေး
Shwe | December 2, 2021 | Celebrity | No Comments
သရုပ်ေ ဆာင် ပိုင် တံခွန်ရဲ့အ စ်မအရင်းဖြ စ်သူ မေချစ်သွေး ကေ တာ့ ပိုင်တံခွန် အတွက် အမိုက် စားဓာ တ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးေ ပးရသူတ စ်ေ ယာက်ဖြစ်ပြီး သူမကိုယ် တိုင် ကလည်း ဓာတ်ပုံရိုက် ပညာကို ဝါသနာပါ သူတစ်ယော က်ဖြစ်ပါတယ်။
မေချစ်သွေး ဟာ ကိုယ် တိုင်လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကူး သူတစ်ယော က်ဖြစ်တာေြ ကာင့် မောင်ဖြစ်သူ ပိုင်တံ ခွန်နဲ့တကွ အနုပညာ အသိုင်းအဝိုင်း နဲ့ နီးစပ်မှုရှိသူ တစ်ယော က်လ ည်းဖြစ်ပါ တယ်။
LGBT တစ်ေ ယာက်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုကို ယ်ခံယူ ထားပြီး ယောကျာ်းလေးတ စ်ယော က်လိုသာ ပြင်ဆင်နေထိုင်လေ့ရှိတဲ့ မေချစ်သွေး ဟာ သူချစ်ရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ေဆာင်းယွန်းစံနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ခံစားချက်ေ တွကို ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ မကြာခဏ ဆိုသလို တင်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာလည်း မေချစ်သွေးက ဆောင်ယွ န်းစံရဲ့ခါးလေးကိုဖက်ပြီး ရိုက်ကူးထား တဲ့ဓာတ်ပုံတစ် ပုံကို သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာမှာတင် ကာ “Hello December!!! Sweet chin loh🥺🖤🐼” ဆိုပြီးေရးသားထားပါတယ်။
မေချစ်သွေးနဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ တို့ဟာ ချစ်သူတြွေ ဖစ်နေတယ် လို့ လူသိရှင် ကြားတရားဝင် ဖွင့်ပြောထားြ ခင်းမရှိပေမယ့် သူတို့နှစ်ေ ယာက်ရဲ့ အပြုအမူ၊ အဆက်အဆံလေးေ တွကိုကြ ည့်ခြင်း အားဖြင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယော က် မေတ္တာမျှနေကြတယ်လို့ ပရိသတ်ေ တွအား လုံးကထင်ေြ ကးပေးနေကြ တာပဲဖြစ်ပါ တယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ ထင်ေြ ကးပေးမှုအပေါ် မေချစ်သွေးနဲ့ ဆောင်းယွန်းစံတို့က ငြင်းပယ်ခြင်းမရှိ တာမို့ အမှန်တက ယ်ချစ်သူတွေဖြ စ်နေကြပြီလို့ ဆို နိုင်ပါတယ်။ Source: May Chit Thway’s fb
သ႐ုပ္ေ ဆာင္ ပိုင္ တံခြန္ရဲ့အ စ္မအရင္းၿဖ စ္သူ ေမခ်စ္ေသြး ေက တာ့ ပိုင္တံခြန္ အတြက္ အမိုက္ စားဓာ တ္ပုံေတြကို ရိုက္ကူးေ ပးရသူတ စ္ေ ယာက္ျဖစ္ၿပီး သူမကိုယ္ တိုင္ ကလည္း ဓာတ္ပုံရိုက္ ပညာကို ဝါသနာပါ သူတစ္ေယာ က္ျဖစ္ပါတယ္။
ေမခ်စ္ေသြး ဟာ ကိုယ္ တိုင္လည္း ဓာတ္ပုံရိုက္ကူး သူတစ္ေယာ က္ျဖစ္တာေျ ကာင့္ ေမာင္ျဖစ္သူ ပိုင္တံ ခြန္နဲ႔တကြ အႏုပညာ အသိုင္းအဝိုင္း နဲ႔ နီးစပ္မႈရွိသူ တစ္ေယာ က္လ ည္းျဖစ္ပါ တယ္။
LGBT တစ္ေ ယာက္အျဖစ္ ကိုယ့္ကိုကို ယ္ခံယူ ထားၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတ စ္ေယာ က္လိုသာ ျပင္ဆင္ေနထိုင္ေလ့ရွိတဲ့ ေမခ်စ္ေသြး ဟာ သူခ်စ္ရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဆာင္းယြန္းစံနဲ႔ ပက္သတ္ၿပီး ခံစားခ်က္ေ တြကို ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ မၾကာခဏ ဆိုသလို တင္ေလ့ရွိပါတယ္။
ဒီတစ္ခါမွာလည္း ေမခ်စ္ေသြးက ေဆာင္ယြ န္းစံရဲ့ခါးေလးကိုဖက္ၿပီး ရိုက္ကူးထား တဲ့ဓာတ္ပုံတစ္ ပုံကို သူမရဲ့ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာမွာတင္ ကာ “Hello December!!! Sweet chin loh🥺🖤🐼” ဆိုၿပီးေရးသားထားပါတယ္။
ေမခ်စ္ေသြးနဲ႔ ေဆာင္းယြန္းစံ တို႔ဟာ ခ်စ္သူေႂတြ ဖစ္ေနတယ္ လို႔ လူသိရွင္ ၾကားတရားဝင္ ဖြင့္ေျပာထားျ ခင္းမရွိေပမယ့္ သူတို႔ႏွစ္ေ ယာက္ရဲ့ အျပဳအမူ၊ အဆက္အဆံေလးေ တြကိုၾက ည့္ျခင္း အားျဖင့္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာ က္ ေမတၱာမၽွေနၾကတယ္လို႔ ပရိသတ္ေ တြအား လုံးကထင္ေျ ကးေပးေနၾက တာပဲျဖစ္ပါ တယ္။
ပရိသတ္ေတြရဲ့ ထင္ေျ ကးေပးမႈအေပၚ ေမခ်စ္ေသြးနဲ႔ ေဆာင္းယြန္းစံတို႔က ျငင္းပယ္ျခင္းမရွိ တာမို႔ အမွန္တက ယ္ခ်စ္သူေတြၿဖ စ္ေနၾကၿပီလို႔ ဆို နိုင္ပါတယ္။ Source: May Chit Thway’s fb
အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ အရမ်းသိချင်နေကြတဲ့ သူမရဲ့ချစ်သူလေးကို ဗွင်းဗွင်းလင်းလင်းကြီး ထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တဲ့ အေးမြတ်သူ ရဲ့ဗီဒီယိုလေး
အပြုံးတွေ၊ အပျော်တွေ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်လေးအတွက် ဆုတောင်းပေးထားတဲ့ အေးမြတ်သူ
မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လတုန်းက အကြောင်းလေး ပြန်ပြောပြလာတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်
နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကြီးမှာ ပွဲဦးထွက် အဖြစ် ထပ်မံပြသခံခဲ့ရတဲ့ အဖမ်းဆီးခံ ပြည်သူ့မင်းသမီးကြီး မမျိုးသန္တာထွန်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ပြေလျော့နွေ ဇာတ်ကား
ပရဟိတလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဖို့ အတွက် အဆောက်အဦး အသစ်ကြီးတစ်ခု ထပ်မံဆောက်လုပ်နေပြန်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
အောင်ရဲလင်း နဲ့ RS ချိတ်ခဲ့တာ နှစ်နှစ်နီးပါးရှိတော့မှာဖြစ်ကြောင်း သက်သေနဲ့တကွ ချပြလာတဲ့ သူမ
လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်နေရာမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့ “နစ်နာမယ်”သီချင်းမူပိုင်ရှင် တေးသံရှင် နော်ဒင့် ကွယ်လွန်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း
ရုံးချိန်းခဏလေး အတွင်းမှာ လေးစားရတဲ့ပရိတ်သတ်တွေထံ အမှာစကား ရအောင်ပါးလိုက်တဲ့ ပြည်သူ့မင်းသား ရဲတိုက်
ဟန်ငြိမ်းဦး သတင်းပေးမှုကြောင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ မိတ်ကပ် Gucci အောင်
ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပီးတဲ့နောက် နှလုံးခုန်တွေ အရမ်းမြန်ပြီး မလှုပ်ရှားနိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကိုပြောပြလာတဲ့ အိအိ